Alvaro Morato oo kale doortay Chelsea iyo Manchester United Kooxda oo ku biiri lahaa ! | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Alvaro Morato oo kale doortay Chelsea iyo Manchester United Kooxda oo ku biiri lahaa !
Alvaro Morato oo kale doortay Chelsea iyo Manchester United Kooxda oo ku biiri lahaa !
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 10:41 AM Xidiga kooxda Juventus Alvaro Morata ayaa lagu soo waramayaa inuu doorbidayo inuu xagaagaan ku biiro kooxda Manchester United inkastoo ay xaqiiqdu tahay inay xiiso u qabto Chelsea.
Sida aga soo xigtay shabakadda Onda Cero, gooldhaliyaha heerka caalami ee dalka Spain ayaa isha ku haya inuu la midoobo tababarihiisii hore ee kooxda Real Madrid Jose Mourinho haddiiba uu xagaagaan u dhaqaaqayo horyaalka England Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, Morata ayaa ku biiri doona Red Devils keliya haddii uu Zlatan Ibrahimovic go’aansado in uusan usoo dhaqaaqin kooxda ka dhisan Old Trafford xilli ciyaareedka soo aadan 2016 illaa 2016.
Ibrahimovic ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu xagaagaan beeca xorta ah ku imaan doono Man United, balse Morata, oo 23 sanno jir ah, ma doonayo inuu kusoo biiro Man United ka dibna uu ka waayo boos joogto ah.
Real Madrid ayaa leh xuquuqda koowaad marka ay timaado iibka xiddigaan u ciyaara Juventus, waxaana la filayaa inay xagaagaan kula soo wareegto 30 milyan oo euros si ay dib ugu iibiso oo ay faa’iido dhaqaale uga sameyso iibkiisa xagaagaan.